Tips & Tricks Archives — Page2of5— Anycall Mobile
Android ဖုန်းတွေမှာ Schedule Message ဘယ်လိုပို့မလဲ?
ဒီနေ့မှာတော့ Schedule Message ပို့ရတဲ့ Feature Built in ပါမလာတဲ့ Android ဖုန်းတွေအတွက် Textra Application လေး အသုံးပြုပြီး Schedule Message ပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒီ Application လေးကို…
iPhone မှာ Battery အား 100 ပြည့်ရင် အသံနဲ့ သတိပေးခိုင်းမယ်
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ iPhone မှာ အား ၁၀၀ ပြည့်ရင် ပြောပေးမယ့် Shortcut လေး ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ ဆိုတာကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Shortcut လေးဖန်တီးမယ် ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Home…
iOS 14 Version User တွေ အားသွင်းတဲ့အချိန် Animation လှလှလေးတွေပေါ်အောင် ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲ?
iOS 14 နဲ့ 14 အထက် Version မှာဆိုရင် ကိုယ့်ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အချိန် Animation အလန်းလေးတွေထားပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုထားပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး App Store ကနေပြီး Charging Animation (free)…
iPhone, iPad ပေါ်က ဓါတ်ပုံတွေကို Password ထားပြီး ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ?
iOS 14 မှာ ဓါတ်ပုံတွေ Hide ချင်တယ်ဆိုရင် Hidden Photos ဆိုတဲ့ Feature လေးပါတယ်။ ဒီကောင်လေး ကိုယ် Hide ချင်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို Folder လိုက် Hide ပေးတဲ့…
Mi Account မလိုဘဲ Theme Store ပေါ်မှာ မရှိတဲ့ Theme အလန်းတွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
Xiaomi China (Stable) အလုံးတွေအတွက် Theme Store ထဲမှာ မရှိတဲ့ အပြင်က Theme အလန်းလေးတွေကို သုံးချင်ရင်တော့ အောက်ကပေးထားတဲ့ Theme Store Link လေးကတစ်ဆင့်ဝင်ပြီး ပြထားတဲ့အဆင့်လေးတွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…
iPhone iPad တွေပေါ်မှာ Google Chrome ကို Default Browser အဖြစ် ဘယ်လိုထားမလဲ?
Apple ရဲ့ iOS 14 နဲ့ iPad OS 14 မှာဆိုရင် Third Party Browser တွေကို Default Browser အဖြစ် အသုံးပြုလို့ ရလာပါတယ်။ Default Browser…
ကိုယ်လိုင်းသုံးနေတာ မသိစေချင်တဲ့သူတစ်ချို့အတွက် သီးသန့် Messenger Active Now ပိတ်နည်း
ဒီနေ့မှာတော့ Messenger မှာ ကိုယ်လိုင်းတက်တာ မသိစေချင်တဲ့သူတွေအတွက် သီးသန့် Active Now ရွေးပိတ်တဲ့နည်းလေး ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံး Chrome Browser ထဲ ဝင်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ အစက်လေး သုံးစက် (Option)…
Apple Watch Series6မှာ Watch OS 7.2 Version Update မြှင့်လိုက်တာနဲ့ Blood Oxygen Feature ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီ
အရင် watchOS 7.1 မှာတုန်းက Blood Oxygen Feature ကို နိူင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ရာကျော်မှာ အသုံးပြုလို့ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ Myanmar Region မပါခဲ့ပါဘူး။ ခု နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ watchOS 7.2…
အသစ်ထွက် iOS 14.3 Version Upadte မှာ Selfie ဆွဲတိုင်း ပြောင်းပြန်မပေါ်တော့ပါ
အရင်တုန်းက iOS Device တွေမှာ Selfie ရိုက်ရင် ပြောင်းပြန်ပေါ်တဲ့ ပြဿနာရှိပါတယ်။ ဒါကို iOS 14 Beta Version မှာ ရခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်း iOS 14 Official ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့…
China Mainland (CH/A) အလုံးတွေမှာ Network Access မရခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ?
ဒီနေ့မှာတော့ China Mainland (CH/A) တွေ Wifi ချိတ်ထားတဲ့ အခြေနေမှာတောင် Internet သုံးလို့မရခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ China Mainland (CH/A) အလုံးတွေရဲ့ Setting က တစ်ခြား…
iPhone Setting ရဲ့ iCloud ထဲမှာရှိတဲ့ Sign Out ဆိုတာလေး နှိပ်မရတာ ဘာကြောင့်လဲ?
iOS User အများစု လွယ်လွယ်လေးနဲ့ သတိမထားမိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မျှဝေပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကလည်း ဒီထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလဲဆိုရင်တော့ ကိုယ်က Setting ထဲက iCloud ထဲ ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ Sign Out…